ကော့မှူးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဟောင်း တိုက်တွန်း
"ဆရာ့မှာ ကော့မှူး ဆိုတဲ့ သမီးပျိုလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်၊ ဒီသမီးပျိုလေးဟာ သူ အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတယ်၊ သူ ပိုယုံလို့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတာလေ။ ဆရာ့ရဲ့ သမီးပျိုလေးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်"
ညွှန်း - မိုးမခ - http://moemaka.blogspot.com/
Dear Dr Soe Min,
Please ask your self and your militry back ground goverment for not killing our monther land and Irrawaddy. Who is selling our mother land to China????? You answer first this question before you ask any things.
You are saying like funniest joke that adking Amay Su like that.
All of you don't ashame.
Demo Mike said... :
အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေသွန်းတာကိုများ
အခုမှ မနှဲလေးလေသံနဲ့ 
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းကပြောထားရင်တော့ ထားပါတော့
လူမလစ်လို့ မဲမခိုးလိုက်ရတော့ ရှုံးသွားမှ ဒီစကား ထွက်လာတယ်
I am pretty sure this man is ' self important '
' arrogant '
' no experience except in Military Medicine '
' Ho Pyaw De Pyaw '
He changedalot of tunes . If you all guys listen to what he saidafew weeks before.
At first, I was thinking of possibility to educate and train him.
His brain is implanted with ' stupid ideas ' . He even notagood candidate for U S D P.
If you all guys study his three video interviews with his body language and his involuntary movements, you all will noticed how he was immature and inexperienced.
Overall assessment of the way he respond to ' concession of by-election'.
He does need to learnalot of ethics of election ( as candidate ) and general knowledge of ' the world and history ' .
all he stated is ' villagers like LuSu LuWay' , ' then ' Daw Su is my elder sister , and she is not experienced and I am experienced in this KawtHmu' . she is good in theory . I am good in practical .
Now he changed it is because of ' economic reasons' . and then ' Foreign Influence'
He was taught by Aung Ye Lin, two days ago on 1 April 12 when he was in Yangon City.
His words reflect that he is ' bilious ' he does havealot of ' bile ' in his gut.
In U S D P , there arealot of good candidates - I am pretty sure.
Well..To U S D P , try to replace him with someone better and more open-minded and let this gentleman to emphasize more on his clinical work.
You'd better focus on your own works. If you want to get into Political life, you'd better quit ur doctor job and get trained by your good seniors to become ' good candidate' . To lure the people with ' Free of charge ' medical practice is ' bloody out of date', especially in this period - asalot of your ancestors bullied, corrupted, neglected, and ripped off own country people ( you own daughter - Ta Mee Lay ) for long time and great extent. The country people had had enough. So they have no feeling of your ancestors.
On top of that,your behaviour and words chosen during the interviews.
There is no better news for the time being for you.
Remember, when you lose, you have to appreciate the winner so also to all voters.
You need to go out of Myanmar for western/eastern country for 3-4 months to learn international experience - not for shopping,pubs and clubs. But for learn from community and library and books.
Ask Aung Thein Lin to sponsor you with his own money. Not from public revenue stolen from years.
Don't let your jealousy burn!
Myo Myanmar said... :
"ဆရာ့မှာ ကော့မှူး ဆိုတဲ့ သမီးပျိုလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်၊ ဒီသမီးပျိုလေးဟာ သူ အိမ်ထောင်ပြုချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ အိမ်ေ...ထာင်ပြုသွားတယ်၊ သူ ပိုယုံလို့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတာလေ။ ဆရာ့ရဲ့ သမီးပျိုလေးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်"
( ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်ကို သမီးပျိုလေး တစ်ယောက်လို တင်စားပြီး ပြောသွားတာ အရမ်းလှတယ်
ဒါပေမယ့် ဒေါက်တာ့သမီးမှာ သက်ဆိုင်သူက တစ်ယောက်တည်း မ က ဘူးလေ၊ ကော့မှူးမဲဆန္ဒနယ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့ လျွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ အမျိုးသားလျွှတ်တော်မှာလည်း တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလျွှတ်တော်မှာဆို နှစ်ယောက်တောင် ရှိတယ်၊ အဲသည် (၄)ယောက်လုံးက ကော့မှူးမြို့ နယ်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်၊
ကော့မှူးနယ်သားတွေက သူတို့ ((၄)ဦးလုံးကို မဲပေးခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၀ မှာ ရွေးချယ်ပြီးသား
၄ ဦးအနက် လစ်လပ်သွားတဲ့ ပြည်သူ့ လျွှတ်တော် နေရာမှာသာ ဒေါ်စု က အရွေးချယ်ခံပြီး
တကယ်တော့ ပြည်သူ့ လျွှတ်တော် အမျုိုးသားလျွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ သူတို့ ကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဒေသအကျိုးကို ဆောင်ရွက်ရမှာ သဘာဝကျပေမယ့် အဲသည်ထက် ပိုအေ၇းကြီးတာက ကိုယ့်မဲဆန္ဒက ပြည်သူတွေ အပါအ၀င် တစ်နုိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေနဲ့ 
ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဥပမာ ပြည်သူတွေ အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ ၊
အကျိုးရှိမယ့် ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းဖို့ ၊ စီးပွားရေးပေါ်လစီတွေချဖို့ ၊ နိုင်ငံတော် ရှေ့ ရေးအတွက်
အားလုံး သဘောတူညီနိုင်မယ့် ဘုံရည်မှန်းချက် တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာဖို့ ကို ပိုမို အားထည့်ပြီး
လုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်၊
ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးကိစ္စတွေကို တော့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်။တိုင်းဒေသကြီးလျွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်တွေက အဓိက အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ
တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေါ့၊
အခုအချိန်မှာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်၊ လျွှတ်တော်တွေ အစိုးရအဖွဲ့ တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ကြီးရဲ့လောင်းရိပ်မိနေပြီး အချို့ သော တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်
တွေက လွဲရင် ပီပြင်မှု မရှိသေးတာကို တွေ့ ရပါတယ်၊ တကယ်တော့ အခြေခံဥပဒေပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ က လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းများက လွဲရင် ကျန်ုလုပ်ငန်းများကို
မိမိတို့လျွှတ်တော်သဘောတူညီချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်လျွှတ်တော်တွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်အများစု အနိုင်ရတဲ့ ပါတီဟာ
အဲသည်တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ အစိုးရဖွဲ့ နိုင်ဖို့ အလားအလာရှိတာကြောင့် နောင်လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျရင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်
လျွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလည်း ပြည်သူ့ လျွှတ်တော် အမျိုးသားလျွှတ်တော်လိုဘဲ အထူး အာရုံစိုက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံလာကြဘွယ်ရှိပါတယ်၊
အဲသည်အခါမှာလည်း မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားကို
ဘယ်ပါတီ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပေးမလဲဆိုတာ ဥာဏ်အမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊)း))
Thein Kyaw said... :
ဒေါက် တာကြီး ခင် ဗျာ၊
ဒေါက် တာကြီး အခမဲ့ ဆေး ကု တာ ဆို တော့ အ ခ မဲ့ စမ်းသပ် ပေး တာ လား?ဆေး ဘိုးဝါး ခ ပါ ဒေါက် တာကြီး က အခမဲ့ ထုတ် ပေး တာ လား မ သိ လို့ မေး တာ နော်၊
အဲဒီ လို အ ခ မဲ့ ဆို တော့ ဒေါက် တာကြီး ရဲ့ စား
၀တ်နေ ရေး ကို ဘယ် အ ဖွဲ့ အ စည်း က ထောက်ပံ့ ပေး ပါ သ လဲ ?
ရှူံးရင်လဲ အေးအေး ဆေးကုပါကွာ။
007 jambom said... :
kyaw said... :
aung than nyunt said... :
တစ်နိုင်ငံလုံးကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်လို့ ရွှေးကောက်ပွဲဝင်တာကွ
ကော့မှူးလေးလောက် သူများခိုင်းတာလုပ်ရင်း သိလာတဲ့ အကောင်ရဲ့
NLD said... :
ပြောလိုက် လုပ်လိုက်မှဖြင့် တလွဲပဲကွယ်
ခင်ဗျားက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကော့မှူးသမီးပျိုလေးရဲ့ မိဘလို့သုံးနှုန်းထားတယ်
ကော့မှူးသမီးပျိုလေးက တခြားသူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတယ်ဆိုတော့ ခင်ဗျားသာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်သွားခဲ့ရင် ကော့မှူးသမီးပျိုလေးက ခင်ဗျားနဲ့လက်ဆက်ရမှာလေ
အဲဒီတော့ ဖအေနဲ့သမီး ပြန်ယူရအောင် ခင်ဗျားက ကိုယ့်သမီးကိုယ် ပြန်ကြံတဲ့ဖအေပဲ
အဲဒီလိုဖအေမျိုးနဲ့ နေမဲ့အစား တခြားသူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ ကော့မှူးသမီးပျိုလေးက ပိုပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှာပါ
HtetNWin said... :
နောက်သူက ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မဟုတ်ဘူး။
ဗိုလ်မှူးနဲ့ ရာထူးဆက်မတက်တော့လို့ ကြံ့ဖွတ်ကို
သူ့လို ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်ပြီး ပြည်သူတွေဆီက ခိုးထားတဲ့
ပိုက်ဆံနဲ့ ပြည်သူကို အခမဲ့ဆေးကုတာမျိုးတော့၏
လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဆေးတပ်ထဲတုန်းကလို ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ
သို့သော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခွင်ရခဲ့သည်ကိုပင်၊ဆုလာဒ်ကြီးတခုရသကဲ့သို့၊ကျေနပ်ကြီးကျေနပ်နေပုံရသည်။လက်ရှိအနေအထားရ ကြံ့ခိုင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ မည်သူတဦးတယောက်မှ၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဆင့်မမှီသေးပါ၊
ဒီလူကြီး ရပ်ကွက်အကျိုးဆောင် ကျေးရွာအကျိုးပြုဖြစ်ရိုး မှန်ရင်
ဒီလို အူကြောင်ကြောင်စကား ပြောမလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်သွားလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီး
ဘာညာ ပြောလိုက်ပြီး သိက္ခာရှိရှိ ရှုံးသွားလို့ရတယ်။
ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဆိုတာ အလကား စကား မဟုတ်ဘူး။
စကား အပြင်း အပျော့ နည်းနည်းပဲ ကွာမယ်။
ဒီလူနဲ့ ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးဌေးဦး တလေသံတည်းပဲ။
ဦးသိန်းစိန်လား။ အခုထိတော့ မျက်နှာဖုံး ကောင်းနေတုန်း။
ဆေး အလကား ကုပေးတယ်ဆိုတာ အများကြီး အကျိုးပြုနေတာ
မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ဆေးကုပေးဖို့ထက်
မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးရမှာ။ ဖြစ်မှ အလကား
ကုပေးတယ်ဆိုတာထက် ပညာပေးရမယ်။ အခုတော့